ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: မြန်မာ-အမေရိကန်တဦး ပြည်တော်ပြန်စဉ် အဖမ်းခံရ
ယခုလ ၃ရက်နေ့က မြန်မာပြည်သွားသော ကိုကျော်ဇောလွင်(ခ) ကိုညီညီအောင်ကို အဆိုပါနေ့မှာပင် ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ မြန်မာအာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။အင်းစိန်ထောင်သို့ အပို့ ခံရပြီးနောက် ရန်ကုန်-အမေရိကန်သံရုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ရပြီဖြစ်သော ကိုကျော်ဇောလွင်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားသူ မြန်မာ-အမေရိကန်တဦးဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့ညက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ ကိုကျော်ဇောလွင်အားဖမ်းဆီးရသည့် အကြောင်းအချက်တချို့ ရှင်းလင်းထုတ်လွှင့်သွားခဲ့ကာ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပါတ်သက်နေကြောင်း စွတ်စွဲထားပြီး တရားေ၇းအရ တရားခွင်မတက်ရသေးသော ကိုကျော်ဇောလွင်တွင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရသည့်အထောက်အထားများတွေ့ရသည်ဟု မြန်မာ-အမေရိကန်သံရုံးမှ ဆိုသည်။
ယခုအချိန်သည် အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်သုံးသပ်တည်ဆောက်နေဆဲ အချိန်ကာလဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန် ၂ဦးမြန်မာအကျဉ်းထောင်များသို့ေ၇ာက်ရှိခဲ့ရသည်။ ပထမဆုံးအဖမ်းခံရသော အမေရိကန်မှာ ဂျွန်ဝီလီယံယက်တောဖြစ်ပြီး မြန်မာတရားဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ကျခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန် အထက်လွတ်တော်အမတ်တဦး၏ ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုမှုအရ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ကာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိသည်။ကိုကျော်ဇောလွင်နှင့် ဆက်စပ်သည့်သတင်းများ ကမ္ဘာ့သတင်းများတွင် တက်လာပြီဖြစ်ရာ အောက်ပါလင့်ခ်များမှ တဆင့် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
written by Mandalay Gazette Editor
Mandalay Gazette သတင်းစာမှ သတင်းကူးယူပါသည်။
US diplomat visits American detained in Myanmar: spokesman
(AFP) – Sep 22, 2009
YANGON — The United States embassy in Myanmar said Tuesday that it has been allowedavisit to an American citizen held in the country since his detention at an airport almost three weeks ago.
A spokesman for the embassy told AFP that Kyaw Zaw Lwin was detained in Yangon on September3and the consular visit was granted on Sunday, although they could not give details as to why he was held.
"Our consul obtained permission and he went and saw him," the spokesman said, adding that they had since passed on information of the Myanmar-born man's circumstances to his family.
"At this point that's all we can say," he added.
Myanmar dissident groups have said Kyaw Zaw Lwin isademocracy activist, and that some of his relatives, including his mother, were arrested during the junta's crackdown on mass protests of September 2007.
He travelled to the country after obtainingavisa from Myanmar's embassy in Bangkok, according to exiled group The 88 Generation Students-Australia.
Inaletter to the junta chief Than Shwe, posted online in English, the group suggested the government "set up the plan to arrest him at arrival at the Rangoon (Yangon) airport because you knew his involvement of democracy".